Ogaden News Agency (ONA) – Calankii Gobolka Axmaarada oo Labadalayo, Sababta.
Calankii Gobolka Axmaarada oo Labadalayo, Sababta.
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia (ONA) ayaa tibaaxaysa in gabi ahaanba labadalayo calankii Kilalka Axmaarada kaas oo mudadii uu Kilalku dhisnaaba calan u ahaa una muuqday mid bulshada Axmaarada matala.
Sida xogta aan kuhelayno shacabka Axmaarada oo mudo dheer cabudhsanaa ayaa sheegay in aysan doonaynin calanka looyeedhiyay ee kooxdii TPLF ay Kilalka Axmaarada usamaysay kaas oo sida ay sheegeen shacabku lagu bahdilay.
Aqoonyahanka iyo Odayaasha Axmaarada ayaa sheegay in calankan loo sameeyay sidii loobahdili lahaa shacabka Axmaarada islamarkaana la isugu dili lahaa bulshooyinka walaalaha ah ee dariska ah, waxayna Waxgaradku sheegeen in uu calankan hada Kilalku uu leeyaya abuuray amaan xumo badan isagoo sababay dagaalada qabiilada Axmaarada Dhexdooda ah, kuwaas oo maamul ahaan lakala qaybiyay.
Waxgaradka Axmaarada ayaa sheegay in lagu laabto calankii Dhargigii oo sida ay sheegeen ahaa astaanta dhabta ah ee Axmaarada iyo guud ahaan wadanka oo dhan waa sida ay hadalka udhigeen e, waxayna sheegeen in calankii hore si dhakhso ah loogu laaban doono.
Soojeedintan shacabka Axmaarada ayaa imanaysa xili maamulka cusub ee Abiye Axmed uu hogaamiyo ay ogolaadeen xoriyada hadalka iyo waliba in ay dadku dareenkooda cabiraan, waxayna arintan umuuqataa mid qoomiyad kasta ay rabitaankeeda kutalaabsan doonto waa hadii maamulka Abiye uu balan qaadkiisii kaga dhabeeyo.
Maamulka Cusub ee Ogadenia loomagacaabay ayaa talaabadiisii koobaad kadhigay in uu badalo calankii sharafta iyo karaamada shacabka Soomaalida Ogadenia kaqaaday ee maamulkii Tigreegu ay shacabka uyeedhiyeen, iyagoo kulaabanaya calankii hooraantii sagaashamaadkii ay samaysteen shacabka Soomaalida Ogadenia iyo Jabhada ONLF oo isku duuban.